Ọnụ ọgụgụ mmadụ nke nyocha data | Martech Zone
O doro anya na nyocha data nwere ihe ịrịba nloghachi na ego… ma na-enweghị ngwaọrụ ndị dị mkpa, ihe na-efu oke ngwa ngwa. Anyị na-eme isiokwu na nyocha asọmpi maka otu n'ime ndị ahịa anyị ihe karịrị izu 3 ugbu a - na-ejikọ ụda data, karịa mkpụrụ okwu 100,000, ma jiri aka ha dozie ya. Nke ahụ dị oke ọnụ ma anyị na-achọ ngwa ọrụ BI ọzọ iji nyere anyị aka belata oge na ọnụahịa nke akụkọ ahụ.
Site na infographic:
Ebumnuche na ọhụụ dị mma, mana azụmaahịa na-eme mkpebi dị oke mkpa site na data ghọtara ahịa ha nke ọma ma nwee mmụba ngwa ngwa. Ihe omuma ahia ahia (BI) nwere ike inyere aka duzie ahia ahia, ihe ohuru, na nlebara anya nke ahia, na onu ogugu ndi ozo di ugbua na otutu ihe omume n'ime nzuko. Mana ịnakọta ma kọọ data a na aka gị nwere ike ịbụ usoro dị oke ọnụ. Iji mee ka a mata ihe kpatara nsogbu a, anyị elegogo anya n'otú akwụkwọ ozi nke akwụkwọ akụkọ ga-esi efu nnukwu azụmaahịa.
Kọlụm Ise Ise mepụtara ihe omuma a maka Domo tinye n'ọrụ nyocha ha na data ha Salary.com. Domo bụ ngwa ọrụ ọgụgụ isi azụmaahịa ọhụrụ (debanye aha na saịtị ha iji banye na mmalite).
Tags: Analyticsbibi ngwaọrụọgụgụ isi azụmahịa-erinyocha datadomoụgwọ